Sat, Apr 21, 2018 | 17:24:19 NST
राजनीतिक अस्थिरताले मानसिक समस्या !
काठमाडौ, असार २३ – राजनीतिक दलका नेताले राजनीतिक अस्थिरताको नकारात्मक प्रभाब नागरिकको मानसिक स्वास्थमा परेको बताएका छन् । देश संविधानसभा चुनाव तिर लम्केकाले चुनाव सफल भए सबै समस्या समाधान हुने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाई छ ।
जंक फुड रोक्न विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स
बलराम घिमिरे/उज्यालो, रसुवा, असार २३ – रसुवाको एक सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरण गरेर जंक फुड प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोठ लगायतका खानेकुरा प्रतिबन्ध लगाउन मालिकादेवी प्राविले आइतबार टिफिन बक्स बितरण गरेको हो ।
२० दिनपछि जोमसोम जाने सडक खुल्यो
बाग्लुङ, असार २३ – २० दिनदेखि अवरुद्ध बेनी जोमसोम सडक आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी घार गाविस भिरकोटमा कालीगण्डकी नदीले बगाएपछि बेनी जोमसोम सडक २० दिनदेखि अवरुद्ध थियो ।
जातीय राज्य माग्नेहरु संघीयता बिरोधीः गौतम
नेपालगञ्ज, असार २३ – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जातीय राज्यको माग गर्नेहरु वास्तविक अर्थमा संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । मंसिर ४ गते चुनाव हुनेमा शंका नगरी सबैजना चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमको भनाई छ ।
फेसबुकबाट पत्ता लाग्छ आत्महत्याको चाहना
असार २३ – जीवनदेखि विरक्तिएर कसैले आत्महत्या गर्ने सोचाइ बनाएको छ भने अब सामाजिक सञ्जालबाट त्यसको पत्ता लाग्ने भएको छ । फेसबुक, ट्वीटर आदिमा पोष्ट गरेका शब्द र वाक्यबाट आत्महत्याको चाहना पत्ता लगाउने प्रबिधिको विकास भएको छ ।
हराएको डेढ महिनापछि किशोरीको शब भेटियो
काठमाडौ, असार २३ – झण्डै डेढ महिनादेखि हराइरहेकी चितवनकी सपना पौडेलको शव काठमाडौमा भेटिएको छ । चितवन भरतपुर ९ की २० बर्षिया पौडेलको शव काठमाडौ ओमबहालको खाली जग्गामा बोरामा पोको पारेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुन साढे सातसय सस्तो
काठमाडौं, असार २३ – हप्ताको पहिलो दिन आइतबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा ७ सय ५० रुपैयाँले घटेर ४८ हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
पूर्वराजाले यसरी मनाए जन्मदिन (फोटो फिचर)
काठमाडौ, असार २३ – पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आइतबार ६७ औं जन्मदिन मनाउनुभएको छ । काठमाडौको निर्मल निवासमा आयोजित जन्मदिनको कार्यक्रममा समर्थकहरुको भीड थियो । उनीहरु हातमा फूलका गुच्छा, खादा र पूर्वराजाको फोटो टाँसिएको प्लेकार्ड बोकेर लामो लाइन बसेका थिए ।
दाङमा दुई दिनमा दुई किशोरी बलात्कृत
दाङ, असार २३ – दाङमा लगातार दुईदिनमा दुई किशोरी बलात्कृत भएका छन् । शनिबार राती १७ वर्षीया किशोरी तुलसीपुर बसपार्कमा बलात्कृत भएको प्रहरीले जनाएको छ । चार जनाको समूहले किशोरीमाथि बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले किशोरीमाथि बलात्कारको आरोपित चारैजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
डोटीमा खानेपानी आपुर्ति बन्द
सिलगढी, असार २३ – डोटीको सदरमुकाम सिलगढीमा खाने पानीको आपुर्ति बन्द भएको छ । असार पहिलो हप्ता भएको वर्षाका कारण मुहानमा पहिरो गएपछि पानी बन्द भएको हो ।
त्रिकोणात्मक क्रिकेट: वेष्टइन्डिज र श्रीलंका जित्नैपर्ने दबाबमा
असार २३ – त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृंखला अन्तर्गत आइतबार राती वेष्टइण्डिज र श्रीलंकाबीच खेल हुँदैछ । पोर्ट अफ स्पेनमा बेलुकी हुने खेल फाइनल प्रवेश गर्न दुवै टीमका लागि महत्वपूर्ण छ । तीन खेल खेलेको वेष्टइण्डिजको दुई जितसँगै नौ अंक छ भने दुई खेल खेलेको श्रीलंकाको ५ अंक छ ।
बारा, असार २३ – बाराको अमलेखगन्जको आधाभार जंगलमा शनिबार राती भएको ट्रक दुर्घटनामा परी एक जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा एक जना घाइते भएका छन् ।
पार्टीमा वैचारिक संघर्ष छैन : भट्टराई
काठमाडौं, असार २३ – एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टी भित्र कुनै वैचारिक संघर्ष नरहेको बताउनुभएको छ । पार्टी संसदीय विकृति विसंगतिमा फस्न थालेको भन्दै राजिनामा दिएका भट्टराईले अहिले पार्टीमा वैचारिक संघर्ष नरहेको र संगठनात्मक समस्या मात्रै भएको बताउनुभयो ।
एसएसबीको अवरोधले नेपालीलाई सास्ती
नवलपरासी, असार २३ – भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नवलपरासीको त्रिवेणी क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ । एसएसबीको उक्त निर्देशनपछि त्रिवेणीका स्थानीय बासिन्दाहरु हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन् ।
मनाङमा ४ महिनामा ३ वटामात्रै उडान
लमजुङ, असार २३ – मनाङमा हप्ताको दुई पटक उडान हुने भएपनि यो वर्ष ४ महिनामा ३ पटकमात्रै जहाज पुगेको छ । गएको फागुनदेखि हवाइ सेवा सञ्चालनमा आएको औपचारिक सूचना दिइएको भएपनि त्यसयता तीन पटक मात्रै जहाज मनाङ पुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
विहारको बोधगयामा श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोट
असार २३ – भारतको विहार राज्यको बोधगयामा श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोट भएका छन् । भारतीय समय अनुसार विहान सवा पाँच बजेपछि हरेक दुई मिनेटको अन्तरमा नौ वटा बम लगातार विष्फोट भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
उज्यालोमा मतदाता नामावली संकलन (फोटो फिचर )
काठमाडौं, असार २३ – उज्यालो नाईन्टी नेटवर्कमा आज फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन हुँदैछ । विहान ११ बजेदेखि निर्वाचन आयोगको टोलीले उज्यालो घरमा शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्ने आशंकामा बालुवाटार क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा
काठमाडौं, असार २३ – काठमाडौंको बालुवाटार र त्यस आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बालुवाटारमा रहेको चिनियाँ दुतावास क्षेत्रमा तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चारदललाई जवाफ पोलिटब्यूरो बैठकबाटै
काठमाडौं, असार २३ – नेकपा–माओवादीले पोलिटब्यूरो बैठकबाट चार दललाई जवाफ दिने भएको छ । चुनावमा भाग लिने शर्तमा सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र समानुपातिक सिट संख्या बढाउने चार दलको निर्णयमा नेकपा माओवादीले औपचारिक जवाफ दिन लागेको हो ।
टिकापुर उद्यानलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाइने
काठमाडौं, असार २३ – नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषले कैलालीको टिकापुर उद्यानलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन गठन गरेको अध्ययन समितिले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । समितिले टिकापुर पुगेर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।
सुन्दरीजल-गोकर्ण खण्डमा स्याटलाईट सिटी बन्ने
काठमाडौं, असार २३ – काठमाडौंको सुन्दरीजल–गोकर्णखण्डमा सुविधासम्पन्न स्याटलाईट सिटी बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नदी किनारका छेउछाउमा व्यवस्थित शहरीकरण गर्न सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा सुन्दरीजल–गोकर्णखण्डमा स्याटलाईट सिटीको अवधारणा ल्याएको हो ।
माओवादी अब मास बेस्ड पार्टी !
काठमाडौ, असार २२ – एकीकृत नेकपा माओवादी पनि अब मास बेस्ड पार्टी बन्ने भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई मास बेस्ड क्यार्डर पार्टी बनाउने संगठनात्मक संरचनाको प्रस्तावना तयार पारेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
बजुरामा चामल सकियो
बाजुरा, असार २२ – बाजुराको कोल्टीमा रहेको खाद्य संस्थानको डिपोमा चामल सकिएको छ । बाजुराका पुर्वोत्तर क्षेत्रका ११ गाविसमा चामल विक्री गर्न खुलेको कोल्टी डिपोमा काजकिरिया गर्नेलाई दिने मात्रै चामल रहेको डिपो प्रमुख रमेशबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
हत्या आरोपमा मलेशियामा ३ नेपाली पक्राउ
भूमिराज पराजुली/उज्यालो, तनहुँ, असार २२ – मलेशिया सेलाङ्गोरमा हत्या अभियोगमा ३ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । उनीहरुसंगै अरु ६ जना बंगलादेशी पनि पक्राउ परेका छन् । गएको आइतबार एक् जना तमिलले होस्टलमा छिरेर जथाभावी पिट्न थालेपछि प्रतिकार गर्दा उनको ज्यान गएको थियो ।
‘दैब लागेपछि कसको के लाग्छ र ?’
राजेन्द्र कार्की/उज्यालो । जाजरकोट, असार २२ – कमाई गर्न भारत गएको छोरा बेपत्ता भएको खबरले टोलगाउँ ४ कि पानसरा सिंहको भोक र निन्द्रा नै हराएको छ । उहाँ अहिले एकोहोरो टोलाई मात्र रहनुहुन्छ । बोल्न खोज्दा गला रोकिन्छ । सदरमुकामबाट दुईदिन पैदल हिडेर पुग्दा उहाँको घर सुनसान थियो ।
अनियमितताको आरोपमा हेडसर निष्काशित
खोटाङ, असार २२ – आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा ओखलढुंगा पात्ले गाविसको शिवालय माविका प्रधानाध्यपक तेजनारायण चौधरीलाई अबिभावकले पदबाट हटाएका छन् ।
जनकपुरधाम, असार २२ – धनुषाको कनकपट्टी ४ तेतरिया बजारबाट प्रहरीले हतियार सहित एक जनालाई पक्रेको छ । कजरा रमौल २ घर भएका २१ वर्षका रामनाथ यादव हतियार सहित पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । यादवलाई अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
जंगलमा भेटिएको बम चार दिनपछि निष्क्रिय
दाङ, असार २२ – रोल्पाको तिलामा पूर्व माओवादी लडाकु शिविर नजिकै जंगलमा भेटिएको बिष्फोटक पदार्थ चार दिनपछि शनिबार निष्क्रिय पारिएको छ । नेपाली सेनाको १९ नम्बर बाहिनी तुलसीपुरको बम डिष्पोज टोलीले बिष्फोटक पदार्थ नष्ट पारेको हो ।
नदीमा बस खस्दा ११ को ज्यान गयो, सातको परिचय खुल्यो
तनहुँ, असार २२ – तनहुँको दमौलीमा यात्रुबस मादी नदीमा खस्दा ११ जनाको ज्यान गएको छ । १० जना घाइते छन् । पोखराबाट नारायणघाटका लागि छुटेको ना ४ ख ४६ ८४ नम्बरको यात्रुबस दमौली बजारको चाइनिजपुलबाट नदीमा खसेर दुर्घटना भएको हो ।
राष्ट्रिय टिम कराँतेका लागि २४ खेलाडी छनोट
काठमाडौ, असार २२ – राष्ट्रिय टिम कराते छनोट प्रतियोगिताका लागि २४ सोतोकान खेलाडी छनोट भएका छन् । नेपाल सोतोकान कराते महासंघले शनिबार गरेको प्रतियोगिताबाट १८ पुरुष र ६ महिला खेलाडी छनोट भएका हुन् ।
‘गैर सरकारी संस्थाहरु पारदर्शी छैनन्’
हेटौडा, असार २२ – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले गैरसरकारी संस्थाको काम पारदर्शी नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारको पहुँच पुग्न नसकेका ठाउँमा महिला, बालिका तथा अपाङ्गको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बाबु बिते, आमा अर्कैसँग गइन्, मैले कसरी पढ्नु ?
सुफल काफ्ले/उज्यालो । काठमाडौ – एसएलसी पास हुने धेरैजसो विद्यार्थी अहिले कलेज जाने तयारीमा छन् । तर पहिलो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीण गरेका भोजबहादुरले भने यो अवसर पाउनु भएको छैन ।
ब्वाइज युनियनद्वारा कुँवर सम्मानित
काठमाडौं, असार २२ - त्रिपुरेश्वरस्थित ब्वाइज युनियन तेक्वान्दो डोजाङले स्विट्जरल्यान्डमा भएको डब्लुटीएफ चौथो विश्व पारा तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा काश्य जित्न सफल नेपाली खेलाडी यादव कुँवरलाई शनिबार सम्मान गरेको छ ।
चीन र स्वीट्जरल्याण्बीच स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता
असार २२ – चीन र स्वीट्जरल्याण्डबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यी दुई देशबीच २ वर्षका लागि स्वतन्त्र व्यापारका कानुनी प्रकृयामा शनिबार बेइजिङमा सम्झौता भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
पन्ध्र वर्षकी किशोरी बलात्कृत
दाङ, असार २२ – दाङमा शुक्रबार दिउँसो १५ वर्षकी किशोरी बलात्कृत भएकी छन् । एसएलसी मौका परीक्षाका लागि तुलसीपुरमा बसेर तयारी गरिरहेकी किशोरी शुक्रबार खर्च लिन घर जानेक्रममा जंगलमा बलात्कृत भएकी हुन् ।
चार दलीय सिण्डिकेट खारेज नभए चुनाव हुँदैन : थापा
काठमाडौ, असार २२ – राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चार दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कायम रहेसम्म संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
अस्थायी शिक्षक र कर्मचारी अनसनमा
काठमाडौं, असार २२ – सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीले शनिबारदेखि काठमाडौंको रत्नपार्कमा रिले अनसन शुरु गरेका छन । सरकारले आफूहरुका मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।